Yehowa De Akatua Pa Hyɛ Daniel Bɔ
Tie Daniel Nkɔmhyɛ No!
KENKAN WƆ Albanian Amharic Arabic Armenian (West) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English French German Hindi Hungarian Italian Japanese Kannada Korean Latvian Lithuanian Luganda Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Silozi Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swedish Twi Ukrainian Vietnamese Yoruba
1, 2. (a) Su a ɛho hia bɛn na mmirikatufo hia na wadi nkonim? (b) Ɔkwan bɛn so na ɔsomafo Paulo de asetra mu nokwaredi wɔ Yehowa som mu totoo mmirikatu ho?
MMIRIKATUFO bi twe ne nan mu na watu mmirika no awie. Wabrɛ yiye, nanso esiane sɛ n’ani tua ne botae no nti, ɔde n’ahoɔden nyinaa bɔ mmɔden sɛ obetwa ɔkwan kakra a aka no. Bere a ɔde n’ahoɔden twe ne nan mu no, otu mmirika no wie koraa! N’anim kyerɛ sɛ ne ho atɔ no na wadi nkonim. Esiane sɛ ogyinaa mu koduu awiei nti, wadi nkonim.
2 Wɔ Daniel ti 12 awiei no, yehu sɛ odiyifo a wɔdɔ no no rebɛn ne “mmirika”—n’asetra a ɔde som Yehowa no awiei. Bere a ɔsomafo Paulo kaa Yehowa asomfo a wɔtraa ase ansa na Kristosom reba ho nhwɛso ahorow ho asɛm akyi no, ɔkyerɛwee sɛ: “Ne saa nti yɛn nso, sɛ yɛwɔ adansefo mununkum a ɛte sɛɛ a atwa yɛn ho ahyia yi, momma yɛntow adesoa biara adesoa ne bɔne a ɛnkyɛ na etwa yɛn ho si gye yɛn asabawmu no ngu, na yɛmfa boasetɔ ntu aperepere a ɛda yɛn anim no mu mmirika, nhwɛ gyidi mu dikanfo ne ne wiefo Yesu a ɔhwɛɛ anigye a ɛda n’anim tɔɔ ne bo ase huu asɛndua ho amane, na wammu aniwu, na wakɔtra Onyankopɔn ahengua nifa.”—Hebrifo 12:1, 2.
3. (a) Dɛn na ɛkanyan Daniel ma ɔde ‘boasetɔ tuu mmirika’? (b) Nneɛma abiɛsa a ɛda nsow bɛn na Yehowa bɔfo kaa ho asɛm kyerɛɛ Daniel?
3 Na Daniel ka “adansefo mununkum” no ho. Ɛda adi sɛ na ɔyɛ obi a ɛsɛ sɛ ɔde ‘boasetɔ tu mmirika,’ na ɔdɔ kɛse a na ɔwɔ ma Onyankopɔn no kanyan no ma ɔyɛɛ saa. Na Yehowa ada nea ɛbɛba wiase nniso horow so daakye ho nsɛm pii adi akyerɛ Daniel, nanso afei Ɔsoma ma wɔde nkuranhyɛ yi brɛ no: “Wo de, kɔ kodu awiei; na wobɛhome, na wobɛsɔre abenya wo kyɛfa wɔ nna no awiei.” (Daniel 12:13, NW) Na Yehowa bɔfo no reka nneɛma abiɛsa a ɛda nsow ho asɛm akyerɛ Daniel: (1) ɛsɛ sɛ Daniel “kɔ kodu awiei,” (2) ‘ɔbɛhome,’ na (3) daakye ‘ɔbɛsan asɔre.’ Ɔkwan bɛn so na nsɛm yi betumi ahyɛ Kristofo nkuran nnɛ ma wɔagyina mu akodu nkwa ho mmirika no awiei?
“KƆ KODU AWIEI”
4. Na dɛn na Yehowa bɔfo kyerɛ bere a ɔkae sɛ “kɔ kodu awiei” no, na dɛn nti na ɛno betumi ayɛ asɛnnennen ama Daniel?
4 Na ɔbɔfo no kyerɛ dɛn bere a ɔka kyerɛɛ Daniel sɛ: “Enti kɔ kodu awiei” no? Ɛyɛ dɛn awiei? Esiane sɛ na aka kakraa bi ma Daniel adi mfe 100 nti, ɛda adi sɛ na asɛm yi fa n’ankasa nkwa awiei a na ɛbɛyɛ sɛ abɛn yiye no ho. * Na ɔbɔfo no rehyɛ Daniel nkuran sɛ ɔmfa nokwaredi nnyina mu nkodu ne wuda. Nanso na saayɛ renyɛ mmerɛw ankasa. Na Daniel atra ase ahu sɛ wɔatu Babilon agu na Yudafo nnommum nkaefo no asan kɔ Yuda ne Yerusalem. Ɛbɛyɛ sɛ ɛmaa odiyifo akwakoraa no ani gyei pii. Nanso, kyerɛwtohɔ biara nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ otuu saa kwan no bi. Ebia saa bere no na wanyin dodo na na onni ahoɔden. Anaasɛ ebia na Yehowa pɛ sɛ ɔkɔ so tra Babilon. Sɛnea ɛte biara no, yɛbɛpɛ sɛ yehu sɛ ebia Daniel werɛ howee wɔ ɔkwan bi so bere a ne manfo gyaw no kɔɔ Yuda man mu no.
5. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Daniel gyinaa mu koduu awiei?
5 Akyinnye biara nni ho sɛ asɛm a ɔbɔfo no de ayamye kae sɛ: “Kɔ kodu awiei” no hyɛɛ Daniel den yiye. Ebetumi akae yɛn nsɛm a Yesu Kristo kae no bɛyɛ mfe ahansia akyi no: “Nea obegyina akodu awiei no, ɔno na wobegye no.” (Mateo 24:13) Akyinnye biara nni ho sɛ saa na Daniel yɛe. Ogyinaa mu koduu awiei, na ɔde nokwaredi tuu nkwa ho mmirika no wiei koraa. Ɛno betumi ayɛ ade biako a enti wɔka ne ho asɛmpa wɔ Onyankopɔn Asɛm mu akyiri yi no. (Hebrifo 11:32, 33) Dɛn na etumi maa Daniel gyinaa mu koduu awiei? N’asetra ho kyerɛwtohɔ boa yɛn ma yenya mmuae no.
GYINA A OGYINAA MU SƐ ONYANKOPƆN ASƐM SUANI
6. Yɛyɛ dɛn hu sɛ na Daniel yɛ Onyankopɔn Asɛm suani a ɔyɛ nsi?
6 Daniel de, na gyina a obegyina mu akodu awiei no hwehwɛ sɛ ɔkɔ so sua Onyankopɔn bɔhyɛ ahorow a ɛyɛ anigye no ho ade na odwen ho yiye. Yenim sɛ na Daniel yɛ obi a n’ani gye Onyankopɔn Asɛm sua ho yiye. Sɛ ɛnte saa a, anka ɛbɛyɛ dɛn na wahu bɔ a Yehowa hyɛɛ Yeremia sɛ nnommumfa no bedi mfe 70 no? Daniel ankasa kyerɛwee sɛ: “Menam nhoma ahorow so huu mfe no dodow.” (Daniel 9:2, NW; Yeremia 25:11, 12) Akyinnye biara nni ho sɛ Daniel hwehwɛɛ Onyankopɔn Asɛm mu nhoma ahorow a na ɛwɔ hɔ saa bere no mu. Ɛda adi sɛ Mose, Dawid, Salomo, Yesaia, Yeremia, Hesekiel nhoma—nea Daniel nsa kae biara—ma onyaa nea ɔde anigye kenkan nnɔnhwerew pii na odwennwen ho.
7. Sɛ yɛde yɛn bere yi toto Daniel nna no ho a, mfaso horow bɛn na yenya fi Onyankopɔn Asɛm sua no mu?
7 Ɛho hia sɛ yesua Onyankopɔn Asɛm dwennwen ho na ama yɛatumi anya boasetɔ nnɛ. (Romafo 15:4-6; 1 Timoteo 4:15) Na yɛwɔ Bible mũ no nyinaa a sɛnea Daniel nkɔmhyɛ ahorow nyaa mmamu wɔ mfehaha pii akyi no ho kyerɛwtohɔ wom. Afei nso, ɛyɛ nhyira ma yɛn sɛ yɛte “awiei bere” a wɔhyɛɛ ho nkɔm wɔ Daniel 12:4 no mu. Wɔ yɛn bere yi so no, wɔama wɔn a wɔasra wɔn no anya honhom fam nhumu, na wɔhyerɛn sɛ nokware akanea wɔ wiase a aduru sum yi mu. Esiane eyi nti, yenim nea Daniel nhoma no mu nkɔmhyɛ ahorow a emu dɔ na emu bi asete yɛ den ma no no kyerɛ ma yɛn nnɛ. Enti, ma yɛnkɔ so nsua Onyankopɔn Asɛm da biara, na yemmmu eyinom mu biara adewa da. Saayɛ bɛboa yɛn ma yɛagyina mu.
DANIEL ANNYAE MPAEBƆ
8. Nhwɛso bɛn na Daniel yɛe wɔ mpaebɔ ho?
8 Mpaebɔ nso boaa Daniel ma ogyinaa mu koduu awiei. Na ɔkɔ Yehowa Nyankopɔn anim da biara de koma a gyidi ne ahotoso ayɛ no ma ne no kɔkasa pefee. Na onim sɛ Yehowa yɛ “mpaebɔ tiefo.” (Dwom 65:2; fa toto Hebrifo 11:6 ho.) Bere a na awerɛhow ahyɛ Daniel koma so wɔ Israel atuatew ho no, ɔkaa sɛnea ɔte nka kyerɛɛ Yehowa. (Daniel 9:4-19) Bere a Dario hyɛɛ mmara mpo sɛ ɔno nkutoo na wommisa biribi mfi ne hɔ nnafua 30 no, Daniel amma ɛno amma wannyae sɛ ɔbɛbɔ Yehowa Nyankopɔn mpae. (Daniel 6:10) So ɛnka yɛn koma sɛ yɛbɛyɛ akwakoraa nokwafo no ho mfonini wɔ yɛn adwenem sɛ ɔde akokoduru gyina amoa a agyata ayɛ mu ma mu sen sɛ anka ɔbɛpo hokwan a ɛsom bo a ɛne mpaebɔ no? Akyinnye biara nni ho sɛ Daniel dii nokware koduu n’awiei, na ofi koma mu bɔɔ Yehowa mpae da biara.
9. Dɛn nti na ɛnsɛ sɛ yebu hokwan a yɛwɔ sɛ yɛbɛbɔ mpae no adewa?
9 Mpaebɔ yɛ adeyɛ tiawa bi. Ɛkame ayɛ sɛ yebetumi abɔ mpae bere biara, wɔ baabiara, denneennen anaasɛ brɛoo. Nanso, mommma ɛmmma sɛ yebebu hokwan a ɛsom bo yi adewa da. Bible no de mpaebɔ bata boasetɔ, animia, ne wɛn a yɛbɛwɛn wɔ honhom fam ho. (Luka 18:1; Romafo 12:12; Efesofo 6:18; Kolosefo 4:2) So ɛnyɛ nwonwa sɛ yetumi ne onipa a ɔkorɔn sen biara wɔ amansan no mu di nkitaho bere nyinaa? Na otie! Kae bere a Daniel bɔɔ mpae na Yehowa somaa ɔbɔfo bi de kyerɛe sɛ watie no. Ɔbɔfo no bedui bere a na Daniel da so ara rebɔ mpae no! (Daniel 9:20, 21) Ebia yɛn bere yi nyɛ bere a abɔfo yɛ nsrahwɛ a ɛte saa, nanso Yehowa nsakrae. (Malaki 3:6) Sɛnea otiee Daniel mpaebɔ no, saa ara na obetie yɛn de nso. Na bere a yɛbɔ mpae no, yɛbɛbɛn Yehowa kɛse, na yɛne no benya abusuabɔ a ɛbɛboa yɛn ma yɛagyina mu akodu awiei sɛnea Daniel yɛe no.
GYINA A OGYINAA MU SƐ ONYANKOPƆN ASƐM KYERƐKYERƐFO
10. Dɛn nti na Daniel buu no sɛ Onyankopɔn Asɛm mu nokware a ɔbɛkyerɛkyerɛ no ho hia ma no?
10 Na ɛsɛ sɛ Daniel “kɔ kodu awiei” wɔ ɔkwan foforo so. Na ɛsɛ sɛ ogyina mu sɛ nokware no kyerɛkyerɛfo. Ne werɛ amfi da sɛ na ɔka nnipa a wɔapaw wɔn a Kyerɛwnsɛm no aka wɔn ho asɛm sɛ: “Mone m’adansefo, [Yehowa, NW] na ose, ne m’akoa a mayi no no” ho. (Yesaia 43:10) Daniel yɛɛ nea obetumi biara sɛ ɔbɛyɛ saa. Ɛbɛyɛ sɛ na adwuma a ɛsɛ sɛ ɔyɛ no fã bi ne sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ n’ankasa manfo a na wɔwɔ nnommumfa mu wɔ Babilon no. Yennim sɛnea ɔne ne mfɛfo Yudafo dii ho nsɛm pii, gye abusuabɔ a na ɔne nnipa baasa a ɔfrɛɛ wɔn “ne mfɛfo no”—Hanania, Misael, ne Asaria wɔ no. (Daniel 1:7; 2:13, 17, 18) Ɛda adi sɛ wɔn adamfofa a na emu yɛ den no yɛɛ pii de boaa wɔn mu biara ma otumi gyinaa mu. (Mmebusɛm 17:17) Na Daniel a Yehowa ama wanya nhumu soronko no wɔ pii a ɔde kyerɛkyerɛɛ ne nnamfo no. (Daniel 1:17) Nanso na ɔwɔ afoforo a ɛsɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ wɔn nso.
11. (a) Dɛn na na ɛda nsow wɔ Daniel adwuma ho? (b) Ɔkwan bɛn so na Daniel tuu mpɔn wɔ ne dwumadi a ɛda nsow no ho?
11 Na adwuma biako a Daniel yɛ sen odiyifo biara ne sɛ obedi Amanaman mu nnipa atitiriw adanse. Ɛwom sɛ mpɛn pii no na ɛsɛ sɛ ɔka nsɛm a atumfoɔ yi mpɛ kyerɛ wɔn de, nanso ɔne wɔn anni te sɛ nea wɔn ho yɛ no ahi anaasɛ wɔba fam sen no wɔ ɔkwan bi so. Ɔde obu ne ahokokwaw kasa kyerɛɛ wɔn. Na ebinom—te sɛ amantam ahene ahoɔyawfo ne atirisopamfo no—wɔ hɔ a wɔpɛe sɛ wɔsɛe Daniel. Nanso, abirɛmpɔn afoforo nyaa obu maa no. Esiane sɛ Yehowa maa Daniel tumi kyerɛkyerɛɛ ahintasɛm a ɛmaa ahene ne anyansafo ho dwiriw wɔn no ase nti, odiyifo no nyaa din kɛse. (Daniel 2:47, 48; 5:29) Ɛyɛ ampa sɛ bere a na ɔrebɔ akwakoraa no wantumi anyɛ pii sɛnea ɔyɛe wɔ ne mmeranteberem no. Nanso akyinnye biara nni ho sɛ okoduu n’awiei a na ɔda so ara de nokwaredi hwehwɛ ɔkwan biara a obetumi afa so asom sɛ ne Nyankopɔn a ɔdɔ no no dansefo.
12. (a) Nkyerɛkyerɛ adwuma bɛn na yɛyɛ sɛ Kristofo nnɛ? (b) Yɛbɛyɛ dɛn atumi adi Paulo afotu a ese ‘yɛnnantew nyansam wɔn a wɔwɔ akyiri no fam’ no so?
12 Yebetumi anya ayɔnkofo anokwafo a wɔbɛboa yɛn ma yɛagyina mu wɔ Kristofo asafo no mu nnɛ, sɛnea Daniel ne n’ayɔnkofo baasa no boaa wɔn ho wɔn ho no. Yɛkyerɛkyerɛ yɛn ho yɛn ho nso, na “yɛhyɛ yɛn ho yɛn ho nkuran.” (Romafo 1:11, 12, NW) Te sɛ Daniel no, yɛwɔ ahyɛde sɛ yebedi wɔn a wonnye nni no adanse. (Mateo 24:14; 28:19, 20) Enti, ɛho hia sɛ yɛma yɛn ho kokwaw yiye na yɛatumi ‘akura nokwasɛm no mu pɛpɛɛpɛ’ bere a yɛka Yehowa ho asɛm kyerɛ nkurɔfo no. (2 Timoteo 2:15) Na sɛ yetie ɔsomafo Paulo afotu yi a, ɛbɛboa: “Monnantew nyansam wɔn a wɔwɔ akyiri no fam.” (Kolosefo 4:5) Adwene a ɛkari pɛ a yebenya wɔ wɔn a ɛsono wɔn gyidi ho no ka nyansa a ɛte saa no ho. Yemmu saafo no animtiaa, na yemmu yɛn ho sɛ yɛkorɔn sen wɔn. (1 Petro 3:15) Mmom no, yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛma wɔanya nokware no ho anigye bere a yɛde Onyankopɔn Asɛm di dwuma anifere ne ahokokwaw so sɛnea ɛbɛyɛ na yɛadu wɔn komam no. Sɛ yɛn nsa tumi ka obi a, hwɛ sɛnea eyi ma yenya anigye! Akyinnye biara nni ho sɛ anigye a ɛte saa no boa yɛn ma yegyina mu sɛnea Daniel yɛe no.
13, 14. Dɛn nti na hwɛ a na Babilonfo hwɛ kwan sɛ wobewuwu no yii wɔn mu pii hu, na ɔkwan bɛn so na ɛsono adwene a na Daniel kura?
13 Afei ɔbɔfo no maa Daniel awerɛhyem sɛ: ‘Wobɛhome.’ (Daniel 12:13) Dɛn na saa asɛm no kyerɛ? Na Daniel nim sɛ obewu. Owu yɛ ade a ɔdesani biara ntumi nkwati, efi Adam bere so de besi yɛn bere so. Bible frɛ owu sɛ “ɔtamfo” ma ɛfata. (1 Korintofo 15:26) Nanso, na ɛsono sɛnea Daniel bu owu a ɔhwɛɛ kwan sɛ ɛbɛto no no wɔ sɛnea Babilonfo a na ɔne wɔn te no nyinaa bu no no. Wɔ wɔn a na wɔde wɔn ho ahyɛ atoro anyame bɛyɛ 4,000 som hwanyann no mu fee fam no, na owu kyerɛ ahude pii ma wɔn. Na wogye di sɛ wɔ owu akyi no, wɔn a wɔannya anigye wɔ asetra mu anaa wowuu atɔfo wu no dan ahonhom werɛdifo a wɔhaw ateasefo. Na Babilonfo gye di nso sɛ awufo atrae bi a ɛyɛ hu, a abɔde a wɔn ho yɛ hu a wɔte sɛ nnipa ne mmoa te hɔ wɔ hɔ.
14 Na owu nkyerɛ saa nneɛma no mu biara mma Daniel. Mfehaha pii ansa na Daniel bere no reba no, na wɔde honhom aka Ɔhene Salomo ma wakyerɛw sɛ: “Awufo de, wonnim biribiara.” (Ɔsɛnkafo 9:5) Na odwontofo no ato owufo ho dwom sɛ: “Ne honhom fi kɔ, ɔsan kɔ ne dɔte mu, da no ara, ne tirim a ɔbobɔe yera.” (Dwom 146:4) Enti na Daniel nim sɛ asɛm a ɔbɔfo no ka kyerɛɛ no no bɛbam. Owu kyerɛ ɔhome. Adwene, ɛyawdi, ayayade—abɔde a wɔn ho yɛ hu biara nni hɔ. Yesu Kristo kaa saa ara bere a Lasaro wui no. Ɔkae sɛ: “Yɛn adamfo Lasaro kɔhome.”—Yohane 11:11, NW.
15. Ɔkwan bɛn so na owuda betumi ayɛ nea eye sen awoda?
15 Susuw ade foforo nti a hwɛ a na Daniel rehwɛ kwan sɛ obewu no amma wansuro no ho. Onyankopɔn Asɛm ka sɛ: “Din pa ye sen ngo pa, na owuda ye sen awoda.” (Ɔsɛnkafo 7:1) Ɛbɛyɛ dɛn na owuda a ɛda adi pefee sɛ ɛyɛ awerɛhow bere betumi ayɛ nea eye sen awoda a ɛyɛ anigye? Mmuae no wɔ “din” no mu. “Ngo pa” bo betumi ayɛ den yiye. Bere bi Lasaro nuabea Maria de ngo huamhuam a ne bo bɛyɛ afe biako akatua sraa Yesu nan ho! (Yohane 12:1-7) Ɔkwan bɛn so na din kɛkɛ betumi asom bo kɛse saa? Hela Septuagint no ka wɔ Ɔsɛnkafo 7:1 sɛ “din pa.” Ɛnyɛ din no kɛkɛ na ɛsom bo kɛse na mmom nea egyina hɔ ma no. Sɛ wɔwo obi a, ne nipasu ne su horow mma onnye din, onni nnwuma pa ho kyerɛwtohɔ ne biribi pa biara a wɔde bɛkae no. Nanso wɔ ne nkwa awiei no, din no da nneɛma yi nyinaa adi. Na sɛ Onyankopɔn bu no sɛ ɛyɛ din pa a, na ɛsom bo koraa sen honam fam ahode biara a otumi nyae.
16. (a) Ɔkwan bɛn so na Daniel bɔɔ mmɔden sɛ obenya din pa wɔ Onyankopɔn anim? (b) Dɛn nti na na Daniel betumi akɔhome a ɔwɔ ahotoso a edi mu sɛ watumi anya din pa wɔ Yehowa anim?
16 Daniel yɛɛ nea obetumi biara wɔ ne nkwa nna nyinaa mu na ama wanya din pa wɔ Onyankopɔn anim, na Yehowa ammu n’ani angu eyi mu biara so. Ɔhwɛɛ Daniel na ɔpɛɛpɛɛ ne koma mu. Na Onyankopɔn ayɛ pii ama Ɔhene Dawid a ɔtoo dwom yi: “[Yehowa, NW], wohwehwɛ me mu, na wuhu me. Wo na wunim m’asetra ne me sɔre, wuhu m’adwenem akyirikyiri.” (Dwom 139:1, 2) Nokwarem no, na Daniel nyɛ pɛ. Na ɔyɛ ɔbɔnefo Adam aseni ne ɔman a bɔne wɔ wɔn ho muni. (Romafo 3:23) Nanso Daniel nuu ne ho wɔ ne bɔne ho na ɔbɔɔ mmɔden sɛ ɔne ne Nyankopɔn bɛnantew wɔ ɔkwan a ɛteɛ so. Enti na odiyifo nokwafo no betumi anya ahotoso sɛ Yehowa de ne bɔne befiri no na ɔmfa nhyɛ ne mu. (Dwom 103:10-14; Yesaia 1:18) Yehowa paw sɛ ɔbɛkae n’asomfo anokwafo nnwuma pa. (Hebrifo 6:10) Ne saa nti, Yehowa bɔfo frɛɛ Daniel mprenu sɛ “ɔdɔfo.” (Daniel 10:11, 19) Eyi kyerɛ sɛ na Daniel yɛ obi a Onyankopɔn dɔ no. Na Daniel betumi de akomatɔyam akɔhome, a onim sɛ wanya din pa wɔ Yehowa anim.
17. Dɛn nti na egye ntɛmpɛ sɛ yenya din pa wɔ Yehowa anim nnɛ?
17 Yɛn mu biara betumi abisa sɛ, ‘So manya din pa wɔ Yehowa anim?’ Yɛte amanehunu bere mu. Ɛnyɛ sɛ yɛreyi obi hu na mmom nokwasɛm no ara na yɛreka sɛ obiara betumi awu bere biara. (Ɔsɛnkafo 9:11) Ɛnde, hwɛ sɛnea ɛho hia yɛn mu biara sɛ ɔbɛbɔ ne tirim sɛ obenya din pa wɔ Onyankopɔn anim nnɛ ara, a ɔntwentwɛn ne nan ase. Sɛ yɛyɛ saa a, ɛho nhia sɛ yesuro owu. Ɛyɛ ɔhome kɛkɛ—te sɛ nna. Na te sɛ nna no, obi nyan wɔ ɛno akyi!
18, 19. (a) Dɛn na na ɔbɔfo no kyerɛ bere a ɔka siei sɛ Daniel ‘bɛsɔre’ daakye no? (b) Dɛn nti na ɛbɛyɛ sɛ na Daniel nim owusɔre anidaso no?
18 Daniel nhoma no de bɔ ahorow a ɛyɛ anigye sen biara a Onyankopɔn ahyɛ onipa pɛn no mu biako na ewie. Yehowa bɔfo no ka kyerɛɛ Daniel sɛ: “Wobɛsɔre abenya wo kyɛfa wɔ nna no awiei.” Na dɛn na ɔbɔfo no rekyerɛ? Esiane sɛ ‘ɔhome’ a ɔkaa ho asɛm nkyɛe no kyerɛ owu nti, na bɔhyɛ a ɛne sɛ Daniel ‘bɛsɔre’ wɔ bere bi akyi no betumi akyerɛ ade biako pɛ—owusɔre! * Nokwarem no, nhomanimfo bi akyerɛ sɛ Daniel ti 12 na ɛka owusɔre ho asɛm a emu da hɔ pefee a edi kan wɔ Hebri Kyerɛwnsɛm no mu. (Daniel 12:2) Nanso, wɔadi mfomso wɔ eyi mu. Na Daniel nim owusɔre anidaso no yiye.
19 Sɛ nhwɛso no, akyinnye biara nni ho sɛ na Daniel nim asɛm yi a Yesaia akyerɛw wɔ mfe ahanu a atwam no mu no: “W’awufo benya nkwa, m’afunu bɛsɔre; munnyan nto ahurusi dwom, mo a mote mfutuma mu, . . . na asase beyi nsamanfo [awufo, NW] agu.” (Yesaia 26:19) Bere tenten ansa na ɔreka eyi no, na Yehowa ama Elia ne Elisa tumi ma wɔde anyan nnipa ankasa. (1 Ahene 17:17-24; 2 Ahene 4:32-37) Ansa na wɔbɛyɛ eyi mpo no, na odiyifo Samuel maame Hana aka dedaw sɛ Yehowa tumi nyan nnipa fi Sheol, ɔdamoa mu. (1 Samuel 2:6) Ansa na ɔno nso reka asɛm yi no, na ɔnokwafo Hiob nso aka n’ankasa anidaso ho asɛm sɛ: “Sɛ onipa wu a, so ɔbɛtra ase bio? Anka m’akodi nna nyinaa mɛtwɛn akosi sɛ me sakra bɛba. Anka wobɛfrɛ, na me nso magye wo so, anka w’ani begyina wo nsa ano adwuma no.”—Hiob 14:14, 15.
20, 21. (a) Owusɔre bɛn na Daniel wɔ awerɛhyem sɛ wɔbɛma wanya bi? (b) Ɔkwan bɛn so na owusɔre wɔ Paradise no bɛba?
20 Te sɛ Hiob no, na Daniel wɔ nea obegyina so anya ahotoso sɛ Yehowa benya ɔpɛ ankasa sɛ ɔde no bɛsan aba nkwa mu daakye. Bio nso, ɛbɛyɛ sɛ onyaa awerɛkyekye kɛse sɛ ɔtee sɛ honhom abɔde tumfoɔ bi si saa anidaso no so dua. Yiw, Daniel bɛsɔre wɔ “atreneefo sɔre” a ɛbɛba wɔ Kristo Mfirihyia Apem Nniso mu no mu. (Luka 14:14) Ɛbɛyɛ sɛ dɛn ama Daniel? Onyankopɔn Asɛm ka eyi ho asɛm pii kyerɛ yɛn.
21 Yehowa ‘nyɛ sakasakayɛ Nyankopɔn, na mmom asomdwoe de.’ (1 Korintofo 14:33) Ɛnde, ɛda adi sɛ owusɔre a ɛbɛba wɔ Paradise no bɛyɛ nnidiso nnidiso. Ebia bere bi betwam wɔ Harmagedon akyi ansa na afi ase. (Adiyisɛm 16:14, 16) Saa bere no na wɔayi nneɛma nhyehyɛe dedaw yi ho biribiara a aka afi hɔ na wɔayɛ ahosiesie a ɛbɛma yɛagye awufo. Bible no de nhwɛso yi ma wɔ sɛnea wobenyan awufo nnidiso nnidiso no ho sɛ: “Na obiara wɔ ne dibea.” (1 Korintofo 15:23) Ebetumi aba sɛ, sɛ ‘owusɔre a wɔn a wɔteɛ ne wɔn a wɔnteɛ benya’ no du a, wobenyan atreneefo no kan. (Asomafo no Nnwuma 24:15) Saa kwan no so no, tete mmarima anokwafo te sɛ Daniel betumi aboa ma wɔadi asase so nsɛm, a “wɔn a wɔnteɛ” ɔpepepem pii a wobenyan wɔn aba nkwa mu a wɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn ka ho no ho dwuma.—Dwom 45:16.
22. Nsɛmmisa bɛn na ɛda adi sɛ Daniel bɛpɛ sɛ onya ho mmuae?
22 Ansa na Daniel bɛyɛ krado adi asɛyɛde a ɛte saa ho dwuma no, akyinnye biara nni ho sɛ obenya nsɛm bi abisa. Anyɛ yiye koraa no, ɔkaa nkɔmhyɛ ahorow a emu dɔ a wɔde maa no no bi ho asɛm sɛ: “Metee, na manhu ase.” (Daniel 12:8) Hwɛ anigye araa a obenya bere a awiei koraa no ɔte ɔsoro ahintasɛm ahorow yi ase no! Akyinnye biara nni ho sɛ ɔbɛpɛ sɛ ɔte Mesia no ho nsɛm nyinaa. Daniel de anigye besua sɛnea wiase tumi no fi ne bere so bedii tumi nnidiso nnidiso de beduu yɛn ankasa bere so, ne nnipa ko a “ɔsorosoroni no akronkronfo” anokwafo—a wogyinaa ɔtaa a wohyiae wɔ “awiei bere” no mu no—yɛ, ne ɔsɛe koraa a Onyankopɔn Mesia Ahenni no de baa nnipa ahenni nyinaa so no.—Daniel 2:44; 7:22; 12:4.
DANIEL KYƐFA—NE WO DE—WƆ PARADISE!
23, 24. (a) Ɔkwan bɛn so na wiase a Daniel benya owusɔre wom no bɛyɛ soronko wɔ nea na onim no ho? (b) So Daniel bɛtra Paradise, na yɛyɛ dɛn hu?
23 Daniel bɛpɛ sɛ ohu wiase a ɔbɛtra mu saa bere no—wiase a ɛyɛ soronko koraa wɔ ne bere so de ho ho nsɛm. Na akodi ne nhyɛso biara a ɛsɛee wiase a na onim no afi hɔ. Na awerɛhow, ɔyare ne owu nni hɔ bio. (Yesaia 25:8; 33:24) Nanso aduan bebu so, yebenya adan pii, na obiara benya adwuma a ɛma akomatɔyam. (Dwom 72:16; Yesaia 65:21, 22) Adesamma bɛyɛ abusua biako a wɔwɔ anigye.
24 Akyinnye biara nni ho sɛ Daniel bɛtra saa wiase no mu. Ɔbɔfo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Wobɛsɔre abenya wo kyɛfa.” Hebri asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase wɔ ha sɛ “kyɛfa” no ne asɛmfua koro no ara a wɔde gyina hɔ ma asase a wɔatwitwa. * Ɛbɛyɛ sɛ na Daniel nim Hesekiel nkɔmhyɛ a ɛkyerɛ sɛnea wɔkyekyɛɛ asase a wɔsan de maa Israel no mu no. (Hesekiel 47:13–48:35) Dɛn na Hesekiel nkɔmhyɛ no kyerɛ wɔ mmamu a ebenya wɔ Paradise ho no mu? Ɛne sɛ Onyankopɔn nkurɔfo nyinaa benya trabea wɔ Paradise, na wɔbɛkyekyɛ asase no pɛpɛɛpɛ sɛnea ɛfata. Nokwarem no, ɛnyɛ asase kɛkɛ na Daniel benya wɔ Paradise. Nea ɔbɛyɛ wɔ Onyankopɔn atirimpɔw mu wɔ hɔ ka ho. Nea ɛbɛyɛ biara Daniel nsa bɛka akatua a wɔde hyɛɛ no bɔ no.
25. (a) Asetra wɔ Paradise ho anidaso ahorow a w’ani gye ho no bi ne nea ɛwɔ he? (b) Dɛn nti na yebetumi aka sɛ Paradise na ɛsɛ sɛ adesamma tra mu?
25 Na wo kyɛfa nso ɛ? Bɔhyɛ koro yi ara betumi afa wo ho. Yehowa pɛ sɛ nnipa asoɔmmerɛfo ‘sɔre’ nya wɔn kyɛfa ne trabea wɔ Paradise. Susuw ho hwɛ! Akyinnye biara nni ho sɛ w’ani begye sɛ wubehyia Daniel ankasa ne mmarima ne mmea anokwafo afoforo a wɔtraa ase wɔ Bible mmere mu no. Afei nso, wobenyan afoforo pii afi awufo mu, na ebehia sɛ wɔkyerɛkyerɛ wɔn na wɔahu Yehowa Nyankopɔn na wɔadɔ no. Twa no mfonini wɔ w’adwenem sɛ woresiesie asase no so de aboa ma asan adan paradise a nneɛma a ɛyɛ fɛ a ɛrensɛe da wom. Fa no sɛ Yehowa rekyerɛkyerɛ wo na woresua sɛnea wobɛtra ase wɔ ɔkwan a ɔpɛe sɛ adesamma tra ase no so. (Yesaia 11:9; Yohane 6:45) Yiw, wowɔ trabea wɔ Paradise. Ɛwom sɛ ebia Paradise no bɛma ebinom ho adwiriw wɔn de, nanso kae sɛ mfiase no Yehowa yɛɛ adesamma sɛ wɔntra beae a ɛte saa. (Genesis 2:7-9) Saa kwan no so no, Paradise yɛ asase so nnipa ɔpepem pii trabea ankasa. Ɛhɔ ne wɔn fie. Ɛhɔ a yɛbɛkɔ no te sɛ nea yɛrekɔ fie.
26. Ɔkwan bɛn so na Yehowa gye tom sɛ ɛnyɛ mmerɛw mma yɛn sɛ yɛbɛtwɛn nhyehyɛe yi awiei?
26 Sɛ yesusuw eyi nyinaa ho a, anisɔ hyɛ yɛn koma ma, ɛnte saa? So w’ankasa wo kɔn nnɔ sɛ wobɛkɔ hɔ? Ɛnde, ɛnyɛ nwonwa sɛ Yehowa Adansefo pɛ sɛ wohu bere a nneɛma nhyehyɛe yi bɛba n’awiei! Ɛnyɛ mmerɛw sɛ yɛbɛtwɛn. Yehowa nim saa, enti ɔhyɛ yɛn nkuran sɛ ‘yɛntwɛn awiei no ara,’ ‘sɛ ɛtwentwɛn ase mpo a.’ Ɔkyerɛ sɛ ebia ɛbɛyɛ te sɛ nea akyɛ wɔ yɛn ani so, efisɛ ɔma yɛn awerɛhyem wɔ kyerɛwsɛm yi ara mu sɛ: “Ɛrenka akyiri.” (Habakuk 2:3; fa toto Mmebusɛm 13:12 ho.) Yiw, awiei no bɛba wɔ bere a wɔahyɛ no mu pɛpɛɛpɛ.
27. Dɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ na woagyina Onyankopɔn anim daa nyinaa?
27 Dɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ bere a awiei no bɛn no? Te sɛ Yehowa diyifo Daniel a ɔdɔ no no, fa nokwaredi gyina mu. Fa nsiyɛ sua Onyankopɔn Asɛm. Fi koma mu bɔ mpae. Fi ɔdɔ mu ne wo mfɛfo gyidifo mmɔ. Fa nnamyɛ kyerɛkyerɛ afoforo nokware no. Bere a nneɛma nhyehyɛe bɔne yi awiei bɛn yiye da biara no, kɔ so si wo bo sɛ wobɛyɛ Ɔsorosoroni no somfo nokwafo ne obi a ɔka N’asɛm kyerɛ denneennen. Tie Daniel nkɔmhyɛ no ɔkwan biara so! Na ɛmmra sɛ Amansan Hene Yehowa bɛma woanya hokwan de anigye agyina n’anim daa nyinaa!
[Ase hɔ nsɛm]
^ nky. 4 Na wɔde Daniel kɔ nnommumfa mu wɔ Babilon wɔ 617 A.Y.B. mu, bere a ɛbɛyɛ sɛ na ɔyɛ aberantewaa no. Onyaa anisoadehu yi wɔ Kores afe a ɛto so abiɛsa, anaasɛ 536 A.Y.B. mu.—Daniel 10:1.
^ nky. 18 Sɛnea The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon kyerɛ no, Hebri asɛmfua a ɛkyerɛ ‘sɔre’ a wɔde di dwuma wɔ ha no kyerɛ “obi a wonyan no wɔ ne wu akyi.”
^ nky. 24 Hebri asɛmfua no ne asɛmfua ma “mmosea,” abo nketenkete a na wɔde bɔ ntonto no sɛ. Ɛtɔ mmere bi a, wɔbɔ ntonto yi kyekyɛ asase. (Numeri 26:55, 56) A Handbook on the Book of Daniel ka sɛ nea asɛmfua no kyerɛ wɔ ha ne “ade a (Onyankopɔn) ayi ato hɔ ama obi.”
DƐN NA WUHUI?
• Dɛn na ɛboaa Daniel ma ogyinaa mu koduu awiei?
• Dɛn nti na hwɛ a na Daniel hwɛ kwan sɛ obewu no amma wansuro?
• Ɔkwan bɛn so na bɔ a ɔbɔfo no hyɛɛ Daniel sɛ ‘ɔbɛsɔre abenya ne kyɛfa’ no bɛbam?
• Ɔkwan bɛn so na w’ankasa woanya Daniel nkɔmhyɛ a woatie no so mfaso?
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 307]
[Kratafa 318 mfonini]
Te sɛ Daniel no, so wutie Onyankopɔn nkɔmhyɛsɛm?
Share Share Yehowa De Akatua Pa Hyɛ Daniel Bɔ
dp ti 18 kr. 306-319
Daniel Nhoma no ne Wo
Daniel—Nhoma a Wɔredi N’asɛm
Wɔsɔɔ Wɔn Hwɛe—Nanso Wodii Yehowa Nokware!
Ohoni Kɛse Bi Sɔre ne N’asehwe
Ogya Antumi Ansɛe Wɔn Gyidi
Dua Kɛse no Ho Ahintasɛm Asekyerɛ
Nsɛmfua Anan a Ɛsakraa Wiase No
Wogyee No Fii Gyata Anom!
Hena na Obedi Wiase So?
Hena na Obetumi Asɔre Ahyɛ Ahene mu Hene No?
Wɔkyerɛ Bere a Mesia No Bɛba
Onyankopɔn Somafo Hyɛ No Den
Ahene Baanu a Wɔredi Ako
Nnipa Ko a Ahene Baanu no Yɛ Sakra
Ahene a Wɔn Ani Nhyia Hyɛn Afeha a Ɛto so 20 no Mu
Ahene a Wɔredi Asi no Awiei Abɛn
Nokware Asomfo a Yebehu Wɔn Wɔ Awiei Bere no Mu
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan Tie Daniel Nkɔmhyɛ No!
Share Share Tie Daniel Nkɔmhyɛ No!